Larzụta Nnukwu Ike Vintage sadulu Women Crossbody akpa - Free Mbupu & Enweghị &tụ | WoopShop®
Akpa Vintage Vintage sadulu Women Crossbody akpa
$ 41.99 Ịgachi price $ 69.99
Agba Black Kọfị Brown
Black Kọfị Brown
Nnukwu Ike Vintage sadulu Women Crossbody akpa - Black na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Isi ihe: PU
Ihe ntinye: Onweghi
Nọmba nlereanya: KS18-1210
Ime: Enweghị akpa
Chọ mma: ọ dịghị onye
Typedị mmechi: mkpuchi
Mpụga: ọ dịghị
Dabere na 31 nyocha
Kwekọrọ na nkọwa)
Akpa mmasị n'ezie. Ọ dị ka akpụkpọ anụ. Lọ ahịa ahụ zigara ngwugwu ahụ n'ụbọchị e nyere iwu ahụ. Sochie esoro. Iwu ahụ bịara na izu 3 ịkwụsị.
Akpa dị mma. Otu akpa dị mma na zipa n'akụkụ, ọ dị mfe ịnweta ihe n'emeghị mmegharị na-enweghị isi. N'ime, obere akpa ọzọ, dị ka akpa ịchọ mma. Eriri abụọ na kit, obere na ogologo. Ka anyị hụ otú ọ ga-adị na sock. Mgbe ị na-azụ afọ ojuju. E nyefere izu 3 na Nizhny Novgorod.
Akpa ahụ dị ezigbo mma. Nnọọ oke, enwere ike itinye ọtụtụ. Bịara ebe izu abụọ na Ukraine + ka tinye akpa ịchọ mma dị ka onyinye)
Obi dị m ezigbo ụtọ na akpa) ezigbo mma, imewe ọhụụ, agba ojii ojii) ekele) na ọnụ ahịa obi ụtọ) n'ọrụ, akpa ịchọ mma pere mpe) ezigbo ego)